चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा हालसम्मकै धेरै पर्यटक घुम्न आएका छन् । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालका अनुसार १ लाख ८५ हजार ६ सय ४४ पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका छन् ।
जलकुम्भी झार जलाशयका लागि खतरनाक बन्दै गएको छ । तालतलैया, खोलानालालाई झपक्क ढाकेको हुन्छ यसले । जलकुम्भी भरिएपछि पानीभित्र जीव र जलचर राम्रोसँग हुर्कन पाउँदैनन् ।
जंगली हात्तीले आक्रमण गर्दा पूर्वी चितवनमा मंगलबार बिहान एकजनाको ज्यान गएको छ । चितवन निकुञ्जको जंगल, राप्ती खोला र मध्यवर्ती जंगलले घेरिएको रत्ननगर नगरपालिका–७ बद्रहनी गाउँका ६२ वर्षीय कान्छा दराईलाई जंगली हात्तीले आक्रमण गरेर ज्यान लिएको हो ।
प्रहरीले चितवनमा ७० वर्षीया एक भारतीय महिलालाई ४३ किलो चरेससहित पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाँडीले सोमबार राति सवा १० बजे रत्ननगर नगरपालिका–२ बाट भारत मोतिहारी जिल्ला घर भएकी नुरजाहा खातुनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
गैंडा जोगाउने जुक्ति- हरुवालाई पोखरी
धमाधम गैंडा मर्न थालेपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले तिनलाई जोगाउने नयाँ उपाय अपनाएको छ– पोखरी बनाउने । गैंडालाई आहाल असाध्यै मन पर्छ । त्यसका लागि एउटै आहालमा धेरै गैंडा जम्मा हुन्छन् । त्यहाँ जुध्ने खतरा बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जुध्दाजुध्दै गैंडाको मृत्युसमेत हुन्छ ।
रैथाने बालीको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने ? रैथाने परिकारलाई बजारमा पुर्‍याउन के गर्नुपर्ला ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न कृषि ज्ञान केन्द्रले शनिबार भरतपुरमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो ।
खेत जोतेर फर्कँदै गरेको ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा शनिबार पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा एकजनाको ज्यान गएको छ । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार रत्ननगर नगरपालिका-१६ खैरेटीमा खेत जोतेर फर्कँदै गरेको ना ७ त ४११ नम्बरको ट्रयाक्टर अनियन्त्रित भइ खेतबाट झण्डै १५ मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा घाइते चालकको उपचारको क्रममा निधन भएको हो ।
गएराति पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिन बजार नजिक माथिबाट खसेको ठुलो ढुंगाले लागेर एउटा मालबाहक ट्रक त्रिशुली नदीमा खस्दा सहचालकको ज्यान गएको छ । उक्त घटनामा परी घाइते ट्रक चालकलाई प्रहरीले उद्धार गरेर भरतपुरमा उपचार गराइ रहेको छ ।
प्रहरीले चन्द समूहका सोलुखुम्बु जिल्ला सेक्रेटरी (सचिव) शिवा खड्कालाई चितवनमा पक्राउ गरेको छ । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी एकनारायण कोइरालाका अनुसार शिवालाई बिहीबार भरतपुर महानगरपालिका–२६ ज्योतिनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
नेपाल टेलिकम भरतपुर कार्यालयले चौकी गाउँको ढोडेनीमा राखेको मोबाइल फोनको टावर सम्झौता गरेको भन्दा फरक व्यक्तिको जग्गामा परेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ । उजुरी परेको लामो समय भए पनि सुनुवाइ नभएको जग्गाधनीले गुनासो गरेका छन् ।